मृ त्युद’ण्डलाई जितेर साउदी अरबबाट नेपाल फर्किए उमेश, विमानस्थलमै यस्तो स्वागत! – PathivaraOnline
Home > समाज > मृ त्युद’ण्डलाई जितेर साउदी अरबबाट नेपाल फर्किए उमेश, विमानस्थलमै यस्तो स्वागत!
admin January 22, 2020 समाज	0
मृ’त्युद’ण्डलाई जितेर धनुषाका ३९ वर्षीय उमेश यादव नेपाल फर्किएका छन् । पाकिस्तानी सहकर्मीको ह’त्या आ’रोपमा उनलाई साउदी अरेबियामा मृ’त्युद’ण्डको सजाय सुनाइएको थियो । धनुषाको कमला नगरपालिका ३ का बासिन्दा उमेश २००६ मा वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा साउदी पुगेका थिए। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लतिफ वासिरको ह’त्या गरेको आ’रोपमा जुवेलका जेनर कोर्टले १५ अप्रिल २०१८ मा मृ’त्युद’ण्डको सजाय सुनाएको थियो।
उमेशलाई घाँटी का’टेर २४ घण्टा झु’ण्डयाउने अदालतले आदेश दिएको थियो। बैदेशिक रोगजागरिमा गएको केहि समयपछि विवादकै क्रममा पाकिस्तानी नागरिकको मृ’त्यु भएपछि उमेशलाई त्यहाँका प्रहरीले ह’त्या आ’रोपमा पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। जुवेल जेनरल कोर्टको आदेशमा उमेशलाई साउदीकै जुवेल जे’लमा राखिएको थियो।
उनको जीवन रक्षाका लागि दुई वर्षदेखि अभियान चलाएका जनकपुरका समाजिक अभियन्ता सरोज रायले उनलाई बिहानै विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन् । उमेशले मृ’त्यु द’ण्डको स’जाय पाउने समाचार दुईवर्ष अघि सार्वजनिक भएपछि जनकपुरका समाजिक अभियन्ता रायले उनको जीवनरक्षाको निम्ति पहल अघि बढाएका थिए।
यो पनिः भारतको केरलाबाट नेपाल घुम्न आएका ८ जना पर्यटककाे ज्यान गएपछि
भारतको केरलाबाट नेपाल घुम्न आएका ८ जना पर्यटकले मंगलबार मकवानपुरमा ज्या’न गु’माए। मकवानपुरको दामनस्थित होटल एभरेष्ट पानोरमा उनीहरुले अकालमा ज्या’न गु’माएका हुन्। चिसो मौसममा होटलको कोठाका झ्याल ढोका ब’न्द गरेपछि हिटर बालेर सुतेका उनीहरुको अक्सिजन अभावमा ज्या’न गएको हो। अ’चेत अवस्थामा होटलमा फेला परेका उनीहरुलाई काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा ल्याएएपछि चिकित्सकहरुले सबैलाई मृ’त घो’षित गरिदिए। भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आएका दुई परिवारका ८ सदस्यको अस्पतालमा ल्याउनुअघि नै मृ’त्यु भइसकेको थियो ।
शिशिर भण्डारीको मर्मसपर्शी भिडियो, जस्ले लाखाैंलाई रुवाएर टिकटकमा भिडियो भाइरल बनेपछि… (भिडियो हेर्नुस)